I-GoogeleCom: Yini Okufanele Uyazi Ngayo? - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
I-GoogeleCom: Yini Okufanele Uyazi Ngayo?
Ukukhetha injini yokusesha kufana nokukhetha umngane womshado: akulula, futhi abantu ngeke bavumelane mayelana nokukhetha okungcono kakhulu. Kodwa uma kuziwa ekusesheni, i-Google idume kakhulu emhlabeni jikelele, futhi ngesizathu esihle. Noma kunini uma sivula isiphequluli sewebhu, singena ku-Google.com, futhi abasebenzisi abaningi bayibhale kabi njenge-Googelecom. Futhi kusukela... Funda kabanzi
Amathiphu ayi-10 Onga Uphethiloli Wemikhumbi Yakho
Ukukhetha injini yokusesha kufana nokukhetha umngane womshado: akulula, futhi abantu ngeke bavumelane mayelana nokukhetha okungcono kakhulu. Kodwa uma kuziwa ekusesheni, i-Google idume kakhulu emhlabeni jikelele, futhi ngesizathu esihle. Noma kunini uma sivula isiphequluli sewebhu, singena ku-Google.com, futhi abasebenzisi abaningi bayibhale kabi njenge-Googelecom. Futhi njengoba iseshwe ngephutha abasebenzisi abaningi, injini yokusesha iyithatha njengegama elingukhiye. Lokhu kuyinto ekhethekile nge-Google.
Kuyazanywa futhi kuhlolwe futhi kuthulule izinkulungwane zamadola ekudaleni injini yokusesha eletha lokho okufunayo. I-Google iphakeme kunezinye izinjini zokusesha ngoba zenze injini yosesho enamandla futhi zasebenzisa ubuhlakani bokwenziwa ukuze zikwethule imiphumela ehamba phambili. Ngaphambi kokuthi uqonde ukuthi kungani i-Google idume kangaka, udinga ukwazi ukuthi i-Google isebenza kanjani.
Isebenza kanjani i-Googelecom?
I-Googelecom ihlakaniphe kakhulu kunezinjini zokusesha zangaphambilini. I-Google isebenza isebenzisa i-algorithm, okuyifomula yezibalo ehlunga izigidigidi zamawebhusayithi futhi izame ukudala imiphumela engcono kakhulu esekelwe emiphumeleni yakho yosesho ehamba phambili ngokushesha. "Kunosesho olungaphezu kuka-100,000 umzuzwana ngamunye kunethiwekhi ye-Google, ngakho-ke amathuba okuba lokho okufunayo sekutholakele ngaphambilini." Abantu abaningi abasebenzisa i-Google abalokothi bacabangele enye injini yokusesha. I-Google isetshenziswa okungenani abantu abangu-95% abasebenzisa i-inthanethi nganoma yisiphi isizathu.
8 Izizathu Zokusebenzisa Injini Yokusesha ye-Google
I-Google ibe ngenye yalezo zinkampani ezingavamile ezihlale ziletha imikhiqizo emangalisayo namasevisi. Nakuba ezinye izinkampani bezibambekile esikhathini esidlule, i-Google iguqule ubuhlakani bayo bokusesha futhi inikeza amathuluzi abalulekile kuwo wonke umuntu.
1. Injini Yokusesha Esheshayo
I-Google noma i-Googelecom ngokungangabazeki iyinjini yokusesha ehamba phambili emakethe namuhla. Uma usesha noma yiliphi igama kubha yokusesha, uzobona imiphumela ehlukene eqoqwe ezinkulungwaneni zamawebhusayithi namabhulogi phakathi nengxenye yesekhondi.
Ungahlola ingxenye yamasekhondi asetshenziswa i-Google ukuze ukhombe yonke imiphumela. Ngokuvamile, i-Googelecom yethula imiphumela phakathi kwamasekhondi angu-0.2 noma angu-0.3. Ngakho-ke, singasho ukuthi i-Google iyinjini yokusesha esheshayo namuhla, futhi abathuthukisi basebenza kanzima ukuyenza isheshe nakakhulu.
2. Injini Yokusesha Ibalulekile Kakhulu
Ukuhambisana kungenye into enhle nge-Google eyibeka ohlwini oluphezulu lwezinjini zokusesha. Noma nini uma ufaka noma yiliphi ithemu, lizokubonisa yonke imiphumela ehlobene etholakala ku-inthanethi ebonwa u-Google.
Ngisho noma ufaka igama elingalungile noma igama elingapeliwe kahle, i-Google izophakamisa imiphumela efanele. Ngesici sayo esithi "Ingabe Ubuqonde", ungathola yonke imiphumela efanelekile futhi ulungise imigomo. Njengoba kushiwo, abantu abambalwa baphuthaza i-Google.com njenge-Googelecom, kodwa noma kunjalo, umphumela ophezulu oboniswe kumphumela uthi i-Google.com.
3. Injini Yokusesha Engcono Kakhulu Yamawebhusayithi namabhulogi
Amawebhusayithi amaningi nabanikazi bamabhulogi benza amasayithi abo abe nezinjini zokusesha ngokugcwele, futhi i-Google iyintandokazi yabo. Nge-Google AdSense, bangakwazi ukwenza imali ngamabhulogi abo futhi baqale ukuhola. Ngakho, i-Google ikhomba imiphumela engcono kakhulu etholakala kumawebhusayithi namabhulogi ahlukene.
Njengoba amabhulogi namawebhusayithi ehlanganisa izindawo ezihlukahlukene, i-Google inquma ngokushesha ukuthi yini esifuna ukuyithola kuwo wonke amagama okusesha. I-Google bot iskrola wonke lawo masayithi athobela imithetho esungulwe i-Google. Ngakho-ke, singasho ukuthi iyinjini yokusesha engcono kakhulu yamabhulogi namawebhusayithi.
4. Iphelele kumadivayisi eselula nawethebulethi
I-Android iwuhlelo lokusebenza lweselula oludume kakhulu namuhla, futhi umnikazi walo u-Google. Ngakho, imikhiqizo eminingi ye-Google ihlanganiswe ku-OS. Ungakwazi ukusesha kalula kuthebhulethi yakho naku-smartphone.
Ngisho noma usebenzisa enye i-OS efana ne-iOS, ungasebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Google. Ngokuhambisana nohlelo lokusebenza lwe-Google Search, ungafaka yonke imikhiqizo ye-Google. Ngakho-ke, i-Googelecom iyi-SE engcono kakhulu yama-smartphones.
5. Amathuluzi E-Google Awusizo Kakhulu
Njengoba kushiwo ngenhla, kunemikhiqizo eminingi ehlinzekwa i-Google. Ungakwazi ukufinyelela kuzo ngokushesha usebenzisa i-Gmail, okuyisevisi ye-imeyili ye-Google. I-YouTube, Izithombe, Indawo Yokusebenzela, futhi kunamathuluzi amaningi anikezwa i-Google.
Ngokuphepha kwabasebenzisi, baphinde babe namathuluzi obumfihlo nawokuvikela. Futhi, abasebenzisi bangashintsha izilungiselelo ezihlobene nenjini yokusesha noma nini lapho befuna.
6. Izici Eziningi Eziwusizo
Njengoba kushiwo ngaphambili, kunemikhiqizo eminingi namathuluzi anikezwa i-Google. Yonke le mikhiqizo inikeza izici ezihlukahlukene eziwusizo. Isibonelo, uma uthayipha igama elinguhhafu, i-Google izophakamisa amagama aphelele ahlukene abanye abasebenzisi abawaseshile.
Ngaphezu kwalokho, ungasesha ngokuya ngezigaba ezifana nezithombe, amavidiyo, izindaba, ukuthenga, ezezimali, nokunye. Isibuyekezo esisanda kukhishwa sivumela abasebenzisi ukuthi baskene noma yisiphi isithombe kuhlelo lokusebenza lwe-Google ukuze bathole imiphumela yosesho ehlobene. Futhi uskena umbhalo usebenzisa amalensi e-Google futhi uwukhiphe (ukopishe).
7. Injini Yokusesha Ephephe Kakhulu
I-Google futhi inikeza izici ezihlukahlukene zokuphepha ukuze abasebenzisi bakwazi ukuphequlula ngokuphephile. Abasebenzisi abasebancane abakutholi okuqukethwe okukhawulelwe ubudala. Futhi, uma ungafuni ukubona okuqukethwe okubekela sobala emiphumeleni yosesho, ungavula i-SafeSearch.
8. I-Google Ingenye Yezinjini Zokusesha Ezingcono Kakhulu Ezimahhala
Nokho, izinjini eziningi zokusesha ezifana ne-Google zitholakala mahhala, kodwa i-Google ihamba phambili kulolu hlobo. Awudingi ukukhokha noma yini ukuze usebenzise injini yokusesha. Isivinini, ukuhambisana, ukunemba, ukuphepha, futhi kunezici eziningi ezenza i-Googelecom injini yosesho ehamba phambili.
Kafushane, i-Google iyinjini yokusesha ehamba phambili emakethe namuhla. Uma sikhuluma ngokuhambisana, i-Googelecom ihamba phambili. Uma sikhuluma ngesivinini, sihamba phambili. Uma sikhuluma ngokunemba, kungcono kakhulu. Ziningi izinjini zokusesha ezitholakala ku-inthanethi njenge-Yahoo, i-Bing, noma i-Ask, ethi ishesha kune-Google. Noma kunjalo, uma uqhathanisa ne-Google, uzothola ukuthi aziqhathaniseki nokuthi i-Google ilayisha ngokushesha kangakanani imiphumela yayo uma iqhathaniswa nezinye izinjini zokusesha.
Lezi yizici ezenza kube engcono kakhulu. Kodwa-ke, emakethe ehlala ishintsha, kungase kube nezinjini ezintsha, ezisheshayo, ezinembe kakhulu esikhathini esizayo, kodwa i-Google izozama ukuba ngcono kunabanye kulo mjaho.
I-Tinder: Ingabe Kuyafana Ne-Tinder Noma Okunye Okuthile?